Bogagga ugufiican ee laga daawado DTT khadka tooska ah iyo telefishanka tooska ah | War gadget
Paul Aparicio | | Burcadbadeednimada
Waxaad rabtaa ka daawo DTT khadka tooska ah? Mararka qaar ma haysanno telefishan u dhow oo aan TV ka daawan karno, laakiin waxaan haysannaa kombuyuutar leh xiriir internet ah. Waxa kale oo jirta suurtagalnimada aan doonayno inaan aragno, tusaale ahaan, kanaal goboleed aan laga heli karin aaggeenna, markaa hab wanaagsan oo loo arko waa booqashada bogagga bixiya telefishanka internetka. Mashiin kasta oo raadinta ah waxaan ka heli karnaa bogag badan oo ballan qaadaya telefishanka khadka tooska ah ee bilaashka ah, laakiin in badan oo ka mid ahi ma bixiyaan waxa ay ballanqaadaan. Taasi waa sababta aan u go'aansanay inaan abuurno maqaalkan si aan kuugu siino waxa aan u aragnay inay yihiin bogagga ugufiican ee laga daawado telefishanka khadka tooska ah.
Sidii caadada u ahayd, liistada soo socota looma kala xigo tayo ama muhiimad, laakiin waxaan ku darsannay sidii aan u soo booqannay. Bogagga soo socda ayaa shaqeynayay waqtiga qoraalkan, laakiin kanaalada qaarkood ma shaqeyn karaan mar. Waxa caadiga ah waa inay beddelaan markay ogaadaan inay dhacday, laakiin muhiim maahan in loo qaato inay dhammaantood had iyo jeer shaqeyn doonaan. Xitaa waa suurtagal in mid ka mid ah bogagga soo socda in ka daawo TV-ga khadka tooska ah Isbaanishka xirmaya mustaqbalka. Waxaan kuu daayey liiska.
1 Websaydhada si looga daawado DTT khadka tooska ah
1.1 Teleefankayga internetka
1.3 Tooska ah ee TV-ga
1.6 TV bilaash ah
2 Faahfaahinta qandaraasyada
2.1 Faa'iidooyinka daawashada DTT khadka tooska ah
2.2 Qasaarooyinka daawashada DTT khadka tooska ah
Websaydhada si looga daawado DTT khadka tooska ah
Haddii waxa aad rabto oo dhan ay tahay ka daawo kanaallada DTT khadka tooska ah, kuwa ugu fiican ayaa ah saddexda bog ee soo socda. Waxa ku yaal bogaggan waa xulasho xiriiriyeyaasha bogagga rasmiga ah kanaal kasta, sidaa darteed ma jirto dariiq ka fiican oo lagu daawan karo kanaalkan khadka tooska ah. Iyagu maahan bogagga leh kanaallada ugu waaweyn, laakiin waxay mudan yihiin in lagu hayo qolka jiifka, haddiiba ay dhacdo.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, hoosta waxaad ka soo uruurineysaa degellada si looga daawado DTT khadka tooska ah marka lagu daro kanaalada caadiga ah ee telefishinka dhulka dijitaalka ah, waxaad heli kartaa kanaal lacag bixin ama mid laga sii daayo dalal kale.
Tooska ah ee TV-ga
Bogagga aad hoosta ku leedahay waxaa ku yaal kanaallo noocyo kala duwan leh oo laga heli karo. Kanaalladaas waxaa ka mid ah kanaallo ay leeyihiin dadka waaweyn, isboorti iyo mowduucyo noocyo kala duwan leh oo caadi ahaan noqon doona kanaalo lacag lagu bixiyo. Adeegsiga kanaalladaan ayaa mas'uul ka ah adeegsade kasta. Actualidad Gadget waxay kaliya bixisaa iskuxirayaasha bogagga, iyadda, oo bixisa kanaallada laftooda.
At VERDIRECTOTV waxaan ku leenahay kanaallo kala duwan. Waan arki karnaa kanaalada DTT, filimada, dokumentariyada, sawirro, gobol ... Oo ma ahan oo keliya kanaalada Isbaanishka, tan iyo waxaa kaloo jira kuwo caalami ah. Waxaan ku arki doonnaa tan, wixii ka sarreeya, qaybta isboortiga, halkaas oo ay jiraan kanaallo lagu daawan karo dhacdooyinka cayaaraha ee bilaashka ka ah dalal kale. Way mudan tahay in lagu keydiyo waxyaabaha ugu cadcad, shaki la'aan.
VerLaTeleGratis waxaan sidoo kale ku yeelan doonnaa liis aad u wanaagsan oo kanaalno ah, kana weyn kii hore. Qaybaha ayaa ku yaal dhinaca midig, in yar oo ka hooseeya, iyo liiska qaybaha waxaan arki karnaa inay sidoo kale jiraan kanaallo ka kala yimid dalal kala duwan (oo ku jira tirada tirada kanaalka). Liiska intaa le'eg, waxay u egtahay in kanaalada qaar aan la heli karin, laakiin badiyaa way buuxiyaan isla marka ay ogaadaan in kanaal hoos u dhacay.
TV bilaash ah
TVgritis waxaan ku leenahay wadiiqooyin kale oo badan oo ay qeybiyeen qaybo badan (waxaad ka arki kartaa shaashadda). Waxaa jira saynis, isboorti, madadaalo iyo wax kasta oo aan qiyaasi karno. Waxa kale oo jira wadiiqooyin dalal badan ka imanaya qaarna waa joogaan kanaalada kooxda kubada cagta, tusaale ahaan. Caqli ahaan, haysashada liistada intaa le'eg, waxay u badan tahay inay jiraan xiriiriyaal iyaguna hoos u dhacaya, laakiin waa qiimaha ay tahay inaad bixiso si aad uga daawato telefishanka khadka tooska ah.
TeleFiveGB waxaan ka heli doonnaa liiska ugu badan ee aan ka helay, dalal kala duwan, xiriiriyeyaal badan oo isla kanaal ah iyo nooc kasta. Waxay umuuqataa in dookhaagu yahay kanaalada isboortiga, laakiin TeleFiveGB waxaan kaheleynaa wax walba, sida Kanaalka + ama kanaalada gobolka. Ha ka waaban inaad ku keydiso waxyaabaha aad ugu jeceshahay inaad isha ku hayso markaad rabto inaad aragto nooc kasta oo dhacdo ah.
TDTvision, inkasta oo aan si cad u aqrin karno DTT, ma jiraan oo keliya marinnada DTT. Waxaan sidoo kale leenahay kanaallo kale oo la heli karo sida Kanaalka + (dhowr ka mid ah), Syfy, Gol TV ama kanaalka NASA. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay dhammaan kanaallada gobolka ee la heli karo iyo in la haysto, iyo sidoo kale isku xirnaanta xiisaha leh ee filimada YouTube-ka (oo kaliya raadinaya qoraalka "filim buuxa" ee barta fiidiyowga ah). Kuma jiraan xayeysiinta xad-dhaafka ah, ee lagu qiimeeyo degel noocan ah.
Hadda waxaan u arkaa mid xiiso leh inaan ka faaloodo faa'iidooyinka iyo qasaaraha daawo internetka tv:
Faa'iidooyinka daawashada DTT khadka tooska ah
Waxaan daawan karnaa tv oo aan lahayn saldhig DTT ah. Tani waxay si gaar ah ugu fiicnaan kartaa qolalkayaga halka, sida caadiga ah, aan lahayn TV ama meesha aan ku xirno.
Kanaalada noocyadooda kala duwan, oo ay ku jiraan isboortiga iyo waxyaabaha dadka waaweyn ka kooban yihiin. Haddii aad rabto, halkan waxaad ka arki kartaa waxa ugu fiican boggaga internetka si looga daawado kubada cagta khadka tooska ah.
free. Liiskan, wax walba waa bilaash, oo ay ku jiraan kanaalada ka yimid barta hore. Haddii, sabab kasta ha noqotee, lagu weydiisto inaad geliso lambarka taleefanka ama nooc kasta oo xog shakhsi ah, waa qayb ka mid ah xayeysiinta ku taal bogga, taas oo ka soo horjeedda kuwa aan hoos ku qoro
Qasaarooyinka daawashada DTT khadka tooska ah
Xayeysii ilaa caajis. Waxaa jira faafinta badan oo la dhihi karo cabsi la'aan in ay karaahiyo noqon karto. Qaarkood, waa inaad dhowr jeer iska xirto pop-up-ka inta aan wax ka aragno. Liiskan kuma soo darin bog tayo leh maxaa yeelay waxaan fureynaa daraasiin daaqado pop-up ah oo markaa loo baahan yahay in mid mid gacanta looga xiro.
Tayada dhexdhexaadka ah muuqaal iyo cod. Tani waa inaysan layaab ku noqon, laakiin marka toos loo daawanayo TV-ga (beenta ah), sawirku marar dhif ah ayuu ka gudbaa tayada SD.
Waxaa jiri kara googoyn. Waxay kuxirantahay shabakada, waxay u egtahay inaan arki doono sida fiidiyowga, sawirka ama labadaba loo jaro sidoo kalena waqti ayuu uga bixi karaa waqtiyada.
Had iyo jeer ama had iyo jeer waxay noqon doontaa lagama maarmaan flash Player.
Waa inuu lahaadaa xiriir wanaagsan. Haddii aad rabto inaad ka daawato telefishanka khadka tooska ah, waa inaad lahaataa xiriir cadaalad ku dhisan. Waxaan dhihi lahaa taas, uguyaraan, waxay qaadan doontaa 6mb in lagu arko iyadoon la goyn, ilaa iyo inta baahinta kanaalka aysan wax dhibaato ah qabin. Haddii aan ku aragno xawaare ka yar, waxay u badan tahay inaan la kulanno jaritaan sababtuna waa mid kale oo aan ahayn maxaa yeelay waa inay buuxisaa keydka ka hor inta aan la ciyaarin waxyaabaha.
Ma ogtahay bogag badan oo loogu talagalay ka daawo DTT khadka tooska ah? Noo sheeg websaydhada aad u isticmaasho daawashada TV-ga khadka tooska ah ee Isbaanishka.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Burcadbadeednimada » Ka eeg TDT khadka tooska ah
daawo tv-ga movistar dijo
Hubin deyn la'aan. TV-ga kula socda.
Jawaab si aad u daawato tv movistar
Xulashada ugu fiican ee si toos ah loogu daawan karo TV-ga tooska ah waa: vertvgratis.info
Ku jawaab loliybartolo
Waxa ugu wanaagsan ee aan helay inaan daawado DTT Isbaanish meel kasta oo aad rabto.
Dhamaan waad salaaman tihiin
Hadda waa suurtagal in la jabsado kombiyuutar iyadoo la adeegsanayo moleculeyaal DNA ah
Intel Core X: dhammaan faahfaahinta qoyska processor-ka cusub ee Intel